नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले तोडे अनसन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले तोडे अनसन
नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले तोडे अनसन	सरकार र डा.केसीबीच पाँचबुँदे सहमति
पुस २९ गते, २०७४ - ११:४४
काठमाडौं । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । शुक्रबार राति सरकारसंग ५ बुँदे सहमित भएपिछ डा. केसीले शनिबार बिहान १० बजे अनसन तोडेका हुन् ।
केसीले जुत्ता सिलाइ पेसा गर्ने नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनमा शशि शर्मालाई पुनर्वाहली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै केसी यसको खारेजी र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै पुस २४ गते अनसन बसेका थिए ।
तर, अदालतले पुस २४ गते उनीमाथि अदालतकाे अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउँदै पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको २ दिनपछि अदालतकै आदेशमा रिहा भएका केसीले सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गर्दै अनसन तोडेका हुन् ।
स्वास्यमन्त्री दीपक बोहोरा नेतृत्वको टोलीसँग त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै डा. केसीले वार्ता गरेका थिए । मन्त्री बाेहाेरा नेतृत्वकाे सरकारी टाेलीमा गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी भएकाे निराजन बमले वताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनशन थालेका डा. केसीले विगत ५ दिनदेखि अनसनरत थिए ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको २३ पुसकाे मुद्दा नं ०७०–WO–०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैर कानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको’ भनी गरिएको आदेश अनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने दाेस्राे बुँदामा लेखिएकाे छ ।
पुस २९ गते, २०७४ - ११:४४ मा प्रकाशित